Iaraha-mahalala, ohatra, ny mikasika ny tany mirefy 60.000ha ny halatr’omby miharo vono olona any Ambovombe Androy. Mamono olona toy izany koa ny tazomoka, hoy ny filoha lefitra, Tsarahame Edouard. 21 ny distrika any Toliara ary samy hitrangana fandrobana sy fanafihana ary misy fakana an-keriny ihany koa. Omby miisa 6000 no nalain’ireo tao amin’ny distrikan’Ambovombe ary na niha lefilefy aza izay tsy fandriampahalemana izay dia niverina nirongatra indray taorian’io. Tao Ampanihy. Tao Bekily vao ny 6 mey teo, olona miantsena no voatafika. Toy ny mamono akoho ny mamono olona any Atsimo. Efa voaroba no mbola voadoro ny tafon-trano miisa 100 tao Ambovobe, hoy hatrany ny RMDM Toliara. Ny tianay hamafisina, hoy izy ireo, dia tsy misy olona afaka hahavita tena samirery fa ny mpitondra antsika dia miheritreritra ny hahavita io fandriampahalemana io samirery. Manoso-kevitra, noho izany, ny RMDM Toliara ny amin’ny tokony hanamafisana ny dina. Raha tsy ny fahefam-pokonolona no omena feno dia tsy hisy zavatra hanjary. Tokony hanampy ny mpitandro filaminana ny fokonolona, hoy hatrany ny fanazavan’ireo, sa ve misy zavatra miafina ambadik’izay?